Minisitry ny fizahan-tany Syriana: Miasa mandroso hisarika ireo mpizahatany avy any Russia
Home » Toerana fitsangatsanganana » Minisitry ny fizahan-tany Syriana: Miasa mandroso hisarika ireo mpizahatany avy any Russia
Miezaka hatrany ny manampahefana ao Syria hisarihana vahiny avy any Russia, miaraka amin'ny fizahan-tany ara-pinoana ho faritra lehibe, hoy ny minisitry ny fizahan-tany Syriana Rami Radwan Martini tamin'ny zoma.
“Eo am-panatanterahana ny asa hisarihana ireo mpizahatany avy any Russia. Ny faritra voalohany dia ny fizahantany ara-pinoana. Mety ho liana amin'ny toerana toa an'i Maaloula, Saidnaya, Aleppo ary Damaskosy ny Rosiana, ”hoy izy.
Raha ny fanazavan ny minisitra dia ny fampandrosoana ny fotodrafitrasa fizahan-tany amoron-dranomasina ny faritra faharoa. Voasarika hanao izany ny renivohitr'i Rosia, hoy izy.
“Andrasana ny fandraisan'anjaranay, izany hoe ny Ministeran'ny fizahan-tany Syriana sy ireo orinasam-pitetezana, amin'ny fampirantiana ao Moskoa. Amin'izany fampirantiana izany dia hanolotra horonantsary, bokikely ary fitaovana hafa izahay momba ny toerana mahaliana an'i Syria izay atolotray hitsidika, ”hoy ny minisitra.
Nanampy izy fa efa eo am-piomanana ny famerenana amin'ny laoniny ny fahagola. Raha ny filazan'i Martini dia nanome aina vaovao ireo tsena manan-tantara ao Homs ny manampahefana Syriana.
“Ary koa, fiangonana maro be no naverina tamin'ny laoniny tao amin'ny Old City of Homs. Ny moske lehibe indrindra ao amin'ny faritra, Moskea Khalid ibn al-Walid, dia nopotehina tanteraka. Afaka namerina azy io izahay, ”hoy ihany izy.
Raha ny momba an'i Aleppo dia tafaverina amin'ny laoniny tanteraka ny tanàna taloha. "Ampidirinay ny distrika rehetra izay naverina tamin'ny laoniny tao amin'ny drafitry ny fizahan-tany mba hahazoana antoka fa misy fizahan-tany ao," hoy ny minisitra.
India: nitarika ny fiakaran'ny vidim-piainana ny fahafatesan'ny Jet Airways, fanafoanana hotely lehibe